अण्डाको मूल्य बढ्यो, प्रति क्रेट २५५ रुपैयाँ पुग्यो - Narayanionline.com
अण्डाको मूल्य बढ्यो, प्रति क्रेट २५५ रुपैयाँ पुग्यो
चितवन (रत्ननगर), असार १४–
नेपाल अण्डा उत्पादक संघ केन्द्रीय समितिले कृषकले पाउने अण्डाको मूल्य वृद्धि गरेको छ । संघले शनिबारदेखि लागू हुने गरी कृषकले पाउने मूल्य ठूलो अण्डाको प्रति क्रेट रु २५५ र मध्यम अण्डाको प्रति क्रेट रु १७० कायम गरिएको संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले जानकारी दिए ।
कँडेलका अनुसार प्रति अण्डाको लागत मूल्य रु १० पर्न जान्छ तर कृषकले रु सातमा वितरकलाई बिक्री गर्दै आएका थिए । यो अण्डा बजारमा एउटाको रु १५ मा पाइन्छ । नेपालमा दैनिक ३५ लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ । यस पेशाबाट प्रत्यक्ष रूपमा एक लाख ७५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । दुई हजारभन्दा बढी किसान लेयर्स कुखुरापालनमा सङ्लग्न छन् । देशमा कुखुरापालन व्यवसायमा भएको लगानीको आधा हिस्सा लेयर्समा रहेको अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । यो व्यवसायमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । (रासस)
इटालीको सिरी ए लीग संचालनको तयारी
शहरको सडकमा बोराभित्रको बास !
चितवनका कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा सांसद र मेयर खटिए
कास्की २ का मतदाता भन्छन्ः “विद्याभित्र रवीन्द्र देख्छौँ”
जब विमानस्थलमा भेटिइन् पर्यटन परी !
माडीका नागरिकको सुरक्षाको लागि निकुञ्ज ऐन परिमार्जन हुँदैछः अध्यक्ष दाहाल
बृहतरूपमा स्वाब सङ्कलन गर्न स्वास्थ्यकर्मी प्रदेश २ प्रस्थान